मालपोतको कुर्सी देखि ढड्डा सच्याउने सबै दलालै दलाल । यसरी दुख दिन्छन् लाइसेन्सको नेपालीकरणमा ! (भिडियोसहित) – पुरा पढ्नुहोस्……
मालपोतको कुर्सी देखि ढड्डा सच्याउने सबै दलालै दलाल । यसरी दुख दिन्छन् लाइसेन्सको नेपालीकरणमा ! (भिडियोसहित)
कलङ्की मालपोत– हामी सरकारी कार्यालयहरूमा हुने घुसखोरी र अनियमितता देखाउँदै आएका छौ । सरकारी कार्यालयहरू बाट प्रदान हुने सेवा सेवाग्राहीले छिटो छरितो पाउनु पर्छ । तर हाम्रो देशमा सेवाग्राहीसंग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारण नागरिकले सधैँ दुख पाइरहेका हुन्छन् ।
सजिलै हुने कामका लागि पनि कर्मचारी चिन्नु पर्ने, सोर्स फोर्स लगाउने परम्परा छ । सेवाग्राहीसंग पैसा लिएर काम गराउने विचौलियाको विगविगी छ । कर्मचारीहरूको साठगांठमा ती विचौलियाहरु सेवाग्राहीसंग पैसा उठाउने गर्छन् । यस्तै अवस्था छ कलङ्की मालपोत कार्यालयको । हाम्रा दर्शक सोमवार उक्त कार्यालय पुग्दा कार्यालयमा कर्मचारी नभई लेखापढी गर्न काम मिलाइदिने विचौलियाहरुको विगविगी थियो । कर्मचारी बस्ने कुर्सीमा समेत उनीहरू बसिरहेका थिए ।
संवेदनशील कागजपत्र फाइल र कम्पुटर समेत यिनै विचौलियाहरुको हातमा छ । कस्तो अचम्म ? कर्मचारी बाहेक कसैले पनि छुन नपाउने कार्यालयका दस्तावेजहरुमा विचौलियाहरुको रजाई । त्यो सबै भिडियो रेकर्ड गरेका हाम्रा दर्शक आज फेरी त्यही कार्यालयमा पुगे । आज पनि अवस्था त्यस्तै थियो ।
हामीले कार्यक्रमको यस अघिको अङ्कमा ताप्लेजुङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी र जनप्रतिनिधि सहित ५५ जनाको टोली शैक्षिक भ्रमाण्मा गएको । कविर १० लाख रुपयां खर्चेर देशका राम्रा सामुदायिक स्कुलहरू अवलोकन गर्ने उद्देश्य सहित उक्त टोली अझै भ्रमणमै छ ।
जिल्लाका स्कुलहरूको अवस्था कति दयनिय छ भन्ने कुरा हामीले देखाइसकेका छौ । अझ झन् चिसो ठांउका विद्यार्थीहरू बासबाट बनेका कक्षा कोठामा बस्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक भ्रमणका नाममा १० लाख खर्च गर्नु कतिको जायज हो भनी हामील जिल्ला शिक्षा अधिकारी चैतन्यप्रसाद निरौलासँग पनि कुरा ग¥यौ । निरौला सरले शैक्षिक भ्रमण जति फलदायी भएको भनेपनि हाम्रो कार्यक्रममा यस विषयमा रिपोटिङ भएसँगै यस विषयमा चर्को बहस हुन थालेको छ । विशेष गरी ताप्लेजुङका स्थानियहरु यस कार्यको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेशीन युवाहरूको सङ्ख्या ठुलो छ । हिजो आज विदेशमा पैसा कमाई नेपाल आएर केही गर्न खोज्ने युवाहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । यसरी स्वदेश फर्कँदा आफूले विदेशमा लिएको सवारी चालक अनुमति पत्रलाई नेपालीकरण गर्न धेरै मानिसहरू यातायात कार्यालय धाउछन् ।
यसै सिलसिलामा केही समय अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुकेधाराका कर्मचारीलाई घुस सहित रंगे हात समातेको पनि देखायौ । अझै पनि विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गर्न कर्मचारीहरूले आफ्नो मनोमानी गरेका छन् । यति सम्मकी दुई तिन दिन सम्म लाइन बसी काउन्सिल शाखाको सिफारिस दूतावासको प्रमाणिकरण र सबै प्रक्रिया पुरा गरिसक्दा पनि लाइसेन्स बन्दैन् । लाइसेन्स दिन मन नलागे भनिन्छ विदेशमा तपाईँले अटोमेटिक गाडी चलाउनु भएको हो यहाँ गएर र क्लज भएको गाडी चलाउनु पर्छ त्यसैले तपाईँलाई लाइसेन्स दिन सकिदैन् ।
सेवाग्राही नेपालमा पनि आफ्नो अटोमेटिक गाडी भएको देखाउँछन् तर पनि कर्मचारी मनगणन्ते नियम देखाउँदै लाइसेन्स नदिने ननसेन्स तर्क दिन्छन् । यस्ता धेरै ठाउँमा ठोकिदा ठोकिदा अन्यमा सर्वसाधारण मानिस यो भन्न बाध्य हुन्छ कि बेकार स्वदेश फर्किए छु ।
अनाथ र असहसाय बालबालिका र तिनका अविभावकलाई मद्दत गर्ने निहुँमा केही मानिसहरूले एउटा सोलिड धन्दा चलाएको खुलिसकेको छ ।
गरिब गांउलेका काखका केटाकेटीलाई खोसेर विदेशीको काखमा हालिदिने अनि विदेशीबाट आएको पैसा पनि आफैले झवाम पार्ने । यस्तो कुकृत्य गर्नेहरुका विरुद्ध बोल्न कडा भन्दा कडा शब्दको खोजी हामी गर्दछौ । किन भने हाम्रो कार्यालयमा त्यस्ता दर्जनौँ अविभावकहरु आशुका धारा चुहाउँदै आउने गरेका छन् । जब तिनको निर्दाेश आँखामा आँखा जुधाएर हेरिन्छ त्यति बेला तिनलाई रुवाउनेहरु विरुद्ध आगो ओकल्न मन हुन्छ । मानिस गरिब हुन सक्छ ।
पीडा बाध्यता सबका जीवनमा हुन्छन् । तर आफ्नो काखको बालक अर्कालाई बेचेर बाँच्ने मन कुनै आमा बाबुलाई हुदैन् । यहाँ त झुक्याएर लैजाने अनि पैसा पनि उन्लाई नदिने आफै खाने । खोज्न आउँदा कोही कुकुर लगाइदिने, कोही गुण्डा लगाउने जस्ता क्रियाकलाप भइरहेका छन् ।
Prevचौँरी गोठले बनायो करोडपति
Nextहोलीमा रंगिदै रवि, हेर्नुहोस् फोटोहरु-होलीमा रविको सन्देश
त्यो फोन जसले मनोज पुनलाई मृत्युको घाट सम्म पुरायो
दुबईमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका खड्गबहादुर जोगी अन्ततः यसरी फर्किन सफल भए नेपाल
फेरी किन रुवा,यो अभिनेत्री परमितालाई पुरानो कुराले , भिडियोबाट मागि,न् माफी (भि,डियो सहित)
ऋचा शर्माको दम्प’ती पहिलो चोटी मि’डियामा आएर साटे खुशी’-हेर्नुहोस रमाइलो (भिडियो कुराकानी)